ဆေးမှတ်တမ်းများဖြန့်ချိခြင်း - Falls Church Healthcare Center
မှတ်ချက် - ဗာဂျီးနီးယားကုဒ်နံပါတ် (၈.၀၁-၄၁၃) အရချာ့ချ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစင်တာရေတံခွန်သည်ဒေါ်လာ ၂၀.၀၀ ရှာဖွေခြင်းနှင့်ကိုင်တွယ်ခြင်းအတွက်အခကြေးငွေအပြင်စာမျက်နှာတစ်ခုလျှင်ဒေါ်လာ ၀.၅၀ အထိ (အများဆုံးစာမျက်နှာ ၅၀ အထိ) အတွက်ကူးယူခကိုကောက်ခံနိုင်သည်။ သင်၏ဆေးကုသမှုမှတ်တမ်းများအတွက်မည်သည့်အခကြေးငွေပေးမည်ကိုသင့်အားအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်စင်တာရှိသင်၏မှတ်တမ်းများကိုကောက်ယူပါကဖုန်းဖြင့်ငွေပေးချေနိုင်သည်။ ခရက်ဒစ်ကဒ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်းငွေသားသို့မဟုတ်အကြွေးကဒ်ဖြင့်ငွေပေးချေနိုင်သည်။
ဘုရားကျောင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစင်တာရေတံခွန် မဟုတ် အီးမေးလ်လူနာ မှတ်တမ်းများ.
လူနာမှတ်တမ်းများကိုအီးမေးလ်ဖြင့်ပေးပို့သောအခါ Falls Church Healthcare Centre သည်နောက်ထပ်ဒေါ်လာ ၇.၉၅ အခကြေးငွေကောက်ခံပြီး Priority Mail မှတဆင့်မှတ်တမ်းများကိုပေးပို့လိမ့်မည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်မေးခွန်းများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကို 703-532-2500 သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ပါ Medical-records@fallschurchhealthcare.com .
အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဆေးမှတ်တမ်းများကိုထုတ်ပေးရန် Falls Church Healthcare Centre အားကျွန်ုပ်အမိန့်ပေးပါသည်။*
စာပို့ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ် ($ 7.95) ကိုမည်သည့်အပြောင်းအလဲမဆိုအခကြေးငွေများထပ်ပေါင်းထည့်မည်။ မှတ်တမ်းများကို ဦး စားပေးစာဖြင့်ပို့လိမ့်မည်။
မှတ်တမ်းကောက်ယူမှုကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ၉း၃၀ မှ ၄း၃၀ သို့စနေနေ့ ၁၁း၀၀ နာရီမှ ၁၂ နာရီအထိစီစဉ်ထားသည်။
လမ်းလိပ်စာ လိုင်း2နေရပ်လိပ်စာ ခံစားချက်တွေကို AlabamaAlaskaArizonaArkansas CaliforniaColoradoConnecticutDelawareကိုလံဘီယာ၏ခရိုင်FloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansas KentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissourimontanaNebraskaNevada New HampshireNew Jersey New Mexico New York North Carolina North DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvania Rhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyomingတပ်မတော်နေ့အမေရိကတိုက်တပ်မတော်နေ့ဥရောပတပ်မတော်နေ့ပစိဖိတ် ပြည်နယ် စာပို့သင်္ကေတ
ဆရာဝန် / ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်အမည်*
ဆရာဝန် / ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ဖုန်းနံပါတ်*
စာပို့ရန်ကုန်ကျစရိတ် $ 7.95 ကိုမည်သည့်အပြောင်းအလဲမဆိုအခကြေးငွေထပ်ထည့်လိမ့်မည်။ မှတ်တမ်းများကို ဦး စားပေးစာဖြင့်ပို့လိမ့်မည်။
တောင်းခံမှုအတွက်အကြောင်းရင်း (များ) (သက်ဆိုင်မှုအားလုံးကိုစစ်ဆေးပါ)
အခြား - အသေးစိတ်ဖော်ပြပါ
ကျေးဇူးပြု၍ သင့်ဓာတ်ပုံ ID ဓာတ်ပုံတင်ပါ*
မက်စ် ဖိုင်အရွယ်အစား -2MB